Raharaha 65 000 Ariary Ny mpiasan’ny foibe ihany no nomen’ny filoha solompenakoho
Nahitsy ny tenin’ny filoham-pirenena teny Iavoloha omaly nanoloana ny mpanao gazety.
Tsy nisy tetibola ho an’ny mpiasam-panjakana rehetra manerana ny Nosy nifanarahan’ny filoha sy ny minisitra nandritra ny filankevitry ny minisitra. Nilaza moa ny minisitry ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika fa noho ny fisian’ny ambim-bola no nahatonga azy nangoraka ireo mpiasam-panjakana hafa. Midika izany fa tsy manana ny rariny ireo mpampianatra izay mitokona milaza fa niangarana raha samy mpiasam-panjakana.
Nilaza ny Filoha omaly fa nasaina nanatitra lisitra ireo minisitra rehetra ka ny roa ihany no nahatonga. Lasa naka fialantsasatra tany ivelany izy ka gaga raha nahare fa nikorontana tanteraka ny fizarana ilay solompenakoho. Notsindriany hatrany fa tsy vola zaraina no tamin’io fa kojakoja sy sakafo tahaka ny fanao isan-taona. Nanitsy mihitsy aza izy fa nisy endrika kolikoly satria nisy nanasonia tsy nisy maribola ireo nandray 9 000 ariary. Ela ihany vao voafehy ity seraseran’ny solompenakoho ity raha vao nitranga dia tokony efa nohazavaina ka izao nitatra hatramin’ny tsy fianaran’ny mpianatra izao.